Soomaali | OneAmerica
Ku Saabsan One America
One America waxay horumarisaa mabaadii’da aas aaska dimuqraadiyada iyo cadaaladdaee heer deegaan,gobol iyo qaran iyadoo dhisaysa awooda dadka wadanka u soo haajiray lana kaashanaysa xubno kale oo muhiim ah.
One America waxaa la aasaasy ka dib September 11, 2001.Si looga hortago fal dambiyeedeyada ku dhisan nacaybka iyo midab takoorka ee lala beegsanayo dadka asalkoodu ka soo jeedo carabta,muslimiinta iyo koonfurta Aasiya. Ururkan oo xilligaas lagu magacaabi jirey “Hate Free zone” hayadani ayaa isu bedelay mid balaaran oo au klu midoobaan u doodayaasha ka soo jeedo qowmniyado kala duwan ee dadka laga tirada badan yahay. One America waxa ay xilligan noqotay hay’ad wayn oo safka hore kaga jirta udifaaca dadka wadankan u soo haajiray, dhinaca arimaha bulshada iyo xuquuqda aadamigaba.
Waxyaabaha Ay Hiigsanaseyso Hayadda.
Si loo gaaro himilada One America waa in la fuliyo shan tan qodob ee soo socda.
1)	In la balaariyo lana horumariyo ka qaybqaadashada ay dadka wadanka u soo haajiray ka qayb qaadanayaan arimaha bulshada.
2)	In si wanaagsan loogu guulaysto badalida sharciyada ku wajahan dadka wadanka u soo haajira heer deegaan iyo mid qaranba.
3)	In la wanaajiyo dareenka guud ee dadweynaha ee ku wajahan dadka wadanka usoo haajira heer deegaan iyo mid qaranba.
4)	In la kordhiyo baaxadda ay leeyihiin ururada hay’adaha u adeegga dadka wadanka u soo haajira guud ahaan gobolada dalka oo dhan si ay ugu doodaan in is bedel la sameeyo.
5)	In la kordhiyo baaxadda hayadda One America si ay u gaarto haddafkeeda ,si buuxda loona gaaro isku filaansho joogta ah.
One America waxaa aasaas u ah oo ay ku hawl gashaa iyadoo ka duulaysa xikmada odhonaysa coddadka wadajira ayaa awood leh. Sidaa darted waxaanu dhisnaa ururo ay ku midaysan yihiin dadka wadanka u dhashay iyo kuwa u soo haajiray. Inkasta,oo si gooni ah loogu soo rogay sharciyo adag oo ka qaadaya dadka wadanka u soo haajiray xuquuqdii uu siiyay dastuurka wadanka u degan iyo kan bani’aadminidaba haddana waxaynu ognahay inay tani wada saameyneyso dadka oo dhan.
Nagala soo xidhiidh(xiriir)
Xafiiskayaga iyo sanduuqa boostada
One America with justice for all [xuquuqda oo loo sinaado]
1225 S Weller St, Suite 200
Fax: 206-826-0423 information@weareoneamerica .org
KANOQO XUBIN Si aan u hormarino dhaqdhaqaaqan dimuqraadiyada , cadaaladda iyo xuquuqda aadamiga. Nacaawi si aan udhisno awood wadajirta si aan u hore marino (ama hore ugu dhaqaajino ) waddankeena,una hubino inuu qof waliba caddaalad hello. Halkii shaqsi ee Xubin kanoqonaya lacagtu waxay ka bilaabantaa $20 keliya sanadkii.
Ma jirtaa sheeko aad rabtid inaad noo sheegto oo ku saabsan imaantinkii aad timid wadankan si aan ugu adeegsano in la sameeyo isbedel guud oo lagu sameeyo sharciyada ku wajahan dadka wadanka u soo haajira. One America waxay dooneysaa inay waraysi la yeelato xubno ka tirsan bulshada ku nool dhamaan gobolka Washington waraysigaas lagu soo ururinayo sheekooyin soo jiidasho leh oo ku saabsan soo haajiradoodii iyo waxii ay la kulmeen. Sheekooyinkiina waxaa la gelin doonaa shabakada internetka si uu cod ugu noqdo hay’adaha u dhaqdhaqaaqa, wax ka bedelida sharciyada ku wajahan dadka wadanka u soo haajiray.
Hadii aad jeceshahay in aad noo sheegtid sheekooyin kaaga fadlan lasoo xidhiiidh, ku xigeenka isgaarsiinta Terseza Mozur
Waxaan si joogtaa u raadinaa inaan helnoo dad jecel in ay u doodaan oo whakhtigooda u huraan dhaqdhaqaaqa soo kordhaya ee u dooda dadka wadanka usoo haajira. Si aad uga qayb qaadato fadlan la soo xiriir David oo lagala soo xiriir karo 206-723-2203x211 ama emailka ah David@WeAreOneAmerica.org
Kala soco bogga dhacdooyinka bulshada